Anja Schaap avy amin'ny Katwijk ny Zoma nanaraka ny faribolan'olona manokana "nalevina": Martin Vrijland
Miala tsiny aho, fa tokony hiteny mafy ny governemanta holandey hoe hamarana ny olana amin'ny endriny, na tsia isika amin'ny fepetra ara-tsaina (PsyOps) tahaka an'i Anja Schaap na Anne Faber. Na izany aza, toa tsy dia misy dikany loatra ny fampiharana, satria mihevitra fa ny fanjakana, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny media sy ny fitsarana, dia mametraka ny PsyOp sy mamorona porofo sandoka, dia mety ho azo amboarina ihany koa ny porofo tsy maintsy omena amin'ny fanilihana PsyOp. Ary raha efa mifamaly ny fitsarana, dia tsy hisy na inona na inona ny fitoriana.
Alao sary an-tsaina ny fangatahana fanandramana ADN hanaporofoana ny fifanarahana amin'ny fianakaviany. Avy eo ny profil tao amin'ny DNA dia azo avy amin'ny ordinatera ary ny profil ADN dia azo atao mifanaraka amin'izany. Koa dikany. Na izany aza dia manontany tena ianao raha toa, ohatra, ny fianakavian'i Anja Schaap raha mbola misy ianao io dokam-barotra io jereo fotsiny ny anarana voalohany.
Sokafy ny tratra ary manana sampan-draharaha mahaleo tena eo amin'ny toerana misy ny fitsapana ADN ary avy eo dia manao toy izany amin'ny fianakaviana lazaina fa mitovy? Tsy tiako mihoatra noho ny fanamafisana na fanilihana ny teôria momba ny asa ara-tsaina aho. Raha ny marina, ianao dia mpirehareha raha mametraka ity karazana lahatsoratra ity ao amin'ny Facebook ianao:
Ny vehivavy iray 33 taona dia tsy hita nandritra ny herinandro ary ny fampahalalam-baovao dia mampiroborobo ny fikarohana an'i Sherlock Holmes raha toa ka misy ny sombiny amin'ny pejy Facebook feno Sherlock Holmes milaza (anisan'izany adiresy an-trano). Izy angamba tany amin'ny cafe niaraka tamin'ny fianakaviana (fa tampoka teo ny lehilahy 1 ihany). Avy eo dia niombon-kevitra izy nitomany nandritra ny alina ary voalaza fa nahita herinandro 3 herinandro taty aoriana tany an-dranomasina nataon'ny mpitaingina alemà iray. Ny tantaram-pandevenana ihany no tara tsy misy sambo alemana jereo fa eo amin'ny (ambony) Schiermonnikoog 3 dia mijanona mandritra ny ora maro. Ary azo itokisana ve izany fa misy vatana mangatsiaka any? Ny hafatra toy izany dia tokony hizara 17 tapitrisa in-droa ary ny hosoka vaovao mpamokatra psyop dia tokony hifoka avy ao amin'ny efitranony. Na dia izany aza, raha mbola maneho izany i Martin Vrijland fa tsy ny Telegraaf na ny NOS, dia mihodina daholo ny rehetra. Na dia miharihary aza izany ... mijanona ho marina ny haino aman-jery ary i Martin Vrijland dia miteraka fikomiana. Sa ve ny lalana hafa? Ahoana no tokony hijerena azy io? Ary miaraka amin'ny rehetra izay mizara zavatra toy izao, ny tafika troll dia miseho amin'ny fanehoan-kevitra toy ny hoe "mankanesa amin'ny fandevenana", "fantatro izy", "mandao ny fianakaviana irery" sy ny sisa.
Noho izany dia maniry aho ny hanana fahafahana hamaha azy amin'ny toerana. Avy eo dia nesorin'ny olon-drehetra izany faniriana hafahafa izany (Martin Vrijland) na ny rehetra dia nahita fa ny fanjakana sy ny media dia mampihetsi-po sy mamitaka. Io farany io dia angamba tsy ny fikasana.
"Fa Freeland malala! Mbola mahita saripikan'i Anja sy Jacolien rahavaviny foana ianao!Tsia, hitako sary aho. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka milaza amin'ny fomba azo antoka ianao raha avy amin'ny olona tena izy ireo sary. Izany koa dia mihatra amin'ny sarimihetsika, horonantsary avy amin'ny lasa, sary avy amin'ny lasa, fampisehoana avy amin'ny kamera fiarovana sy ny sisa sy ny sisa. Nahoana? Satria ireo mpamokatra TV dia nanan-karena nandritra ny fotoana lava mba hahatonga ireo lazaina ho lalotra. "Eny, saingy nisy olona nahafantatra azy!"Tsy fantatrao izany. Miteny amin'ny media sosialy ianao na amin'ny toe-javatra sasany izay mihambo ho mahalala ny toetrany. Ireo tambajotra sosialin'ny tambajotra sosialy ihany koa dia afaka mamorona mora ihany koa amin'ireo orinasa izay miompana amin'ny fanodikodinam-panafody ary ireo "tena olona" dia mety ho Inoffizieller Mitarbeiter 'izay eto sy ao dia vonona ny handrakotra ilay tantara. Tsy misy zavatra toa toa tsy misy intsony. Vakio ity lahatsoratra ity mba hahitana marina ny fomba tsotra.
Ny hany zavatra azonao jerena dia ny hoe raha vantany vao mandoa ny sain'ny olona amin'ny zavatra iray ny media dia aorian'ilay valiny ara-pihetseham-po eo amin'ny vahoaka, ny lalàna vaovao dia matetika ampidirina izay tsy nekena raha tsy tamin'ny hetsika lehibe. Raha ny an'i Anja Schaap dia sahala amin'ny hoe misy ifandraisany amin'i PsyOp fa tokony hiverina ho mpihaza Pokémon Go ireo vahoaka, fa avy eo ny mpiara-belona aminy. Mila maka ny app de Sherlock Holmes en masse isika mba hahafahan'ilay namadika ny mpiara-belona ho toy ny lalao Pokémon ary heverinareo fa manana tanjona tsara ianao (satria Anja Schaap, Anne Faber, sy ireo zavatra hafa tsy hita). Ho avy tsy ho ela, ny fanjakana dia afaka maka mora amin'ireo izay mandositra ny fitondrany ao amin'ny fitondrana polisy, ary koa mihaino azy ireo (sy mijery) ireo telefaona rehetra nametraka izany fampiharana izany.
Inona koa no mbola anontaniako? Noho izany ny NFI na ilay malaza atao hoe Anass Aouragh (PsyOp?), Frank van de Goot, dia efa afaka nanao fanoherana? Efa antitra ve ny anton'ny fahafatesana? Eny ary, efa voamarika izany raha i Frank van de Goot ao amin'ny AD nilaza fa efa lany tamingana ny vatany ary mety ho simban'ny zavamananaina isan-karazany any an-dranomasina. Ahoana anefa no handehanan'ilay fandevenana ny zoma manaraka? Ary inona no azo avela amin'ny anabavy Anja (avy amin'i Jacolien) raha afaka mandà izy? Ho napetraka amin'ny vatam-paty ve ny tovovavy Madame Tussaud satria raha tsy izany dia hanomboka handroka kely loatra ao amin'ny fiangonana izy? Miala tsiny amin'ny fisalasalako, saingy tsy mino an'io tantara io mihitsy aho mandra-pahatongan'ny fahatongavana henjana. Saingy mety hampihorohoro izany isika, satria iza no mbola afaka manamarina ny "porofo" ho an'ny fahamarinana?
Niverina tany Katwijk i Anja. Nifidy akanjo ho azy izy ary sarin'i Anja tsara tarehy. Nitsidika azy ny hariva. Malahelo ny rahavaviko sy ny namako. Inona no havaliko anao
- Jacolien Schaap (@JacolienSchaap) Jona 23 2019
Eo amin'ny tarehinao:
Hitako fa ny dimy aminay no mandeha eo anelanelany. Beautiful animals😊 pic.twitter.com/BCAwEqWv50
- Jacolien Schaap (@JacolienSchaap) Jona 24 2019
Lisitry ny rohy loharano: omroepwest.nl, ad.nl
Anja Schaap no nahita fatin'ny alemana maty tany an-dranomasina? Azo atao ve izany araka ny lalàn'ny natiora?
Tags: Anja, fandevenana, nandevina, ny, fahafatesana, Featured, Frank, fantsona, Holmes, faharavan'ny, hetsika, pathologist, ara-tsaina, psyop, ondry, Sherlock, dia
24 June 2019 ao amin'ny 13: 53
Fanamarihana: mbola misy ny fahafahana nananan'i Anja Schaap.
Avy eo dia mbola azo atao izany (ao anatin'ny tontolon'ny PsyOp).
Mety ho marina ihany koa ny tantara, saingy ny teboko dia ny fisian'ny toetra iray hafa rehetra mety ho an'ny PsyOp.
24 June 2019 ao amin'ny 16: 59
Ry Martin tompoko, diso tanteraka ianao ... milaza ny mpitandro filaminana fa ny raharaha dia mihidy.
"Araka ny filazan'ny polisy, mety ho ny vatan'ny olona no handona ny rano ao Katwijk ary noho ny tondra-drano, dia mihatra ambonin'ny nosy atsinanan'i Holandy."
"Nahazo ny vatana mangatsiakan'i Anja ny ekipan'ny sambo alemana iray."
24 June 2019 ao amin'ny 21: 49
Martin, mahafinaritra fotsiny ianao. Ary manan-jo hanana ahiahy mikasika ny 'zava-misy' natolotry ny governemanta. Ny zon'ny fisalasalana, ny fisalasalana, ary ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina malalaka ara-dalàna. Mampalahelo fa ity farany ity dia tsy ilay tranga izay ary dia hotarihina.
Eny, tsy tia ny zo hisalasala ireo zatovolahy avy ao amin'ny script. Tsy mifanentana amin'i Hen. Ireo tanora ireo dia maniry sy mangataka ny ampihimamba amin'ny 'zava-misy' sy ny ampihimamba amin'ny fandikana ny 'zava-misy'.
25 June 2019 ao amin'ny 16: 05
hahaha BNR izy dia anisan'ny olana amin'ny vaovao diso, mpilalao ... 😛
26 June 2019 ao amin'ny 00: 30
Ny mpikirakira BNR dia antsoina hoe programa. Koa mamaritra ny sarinao izy ireo; ny fahitanao an'izao tontolo izao
27 June 2019 ao amin'ny 22: 43
Katwijkers ho anareo rehetra
Raha toa ianao, tahaka ny tonian'ny gazety iray, dia miresaka momba ny fiaraha-miory
Ny olona iray fantatra vao fantatra dia fantatrao fa miampita ny fetran'ny fangoraham-po ianao. (ampiasaina matetika ny vola) saingy tsy dia miombom-pihetseham-po amin'izany izany.
Na fantatrao fa tsy hisy ny fanoherana satria tsy misy olon-tiany, iza no hiteny? Tsy fantatsika fotsiny izany
Nisy toerana iray natokana ho an'ny gazety nandritra ny fampiononana? Miandrasa !!! Nahoana no tsy nisy ny fihaonamben'ny mpanao gazety mialoha ny nahitana ilay olona tsy hita, satria ny gazety dia nanizingizina fa mety heloka bevava izany. Ny olona 17million dia tsy navela niaraka tamin'ny tantara manontolo ary manana zo feno amin'ny mangarahara, fanazavana avy amin'ny media / hery / polisy.
Nahoana no tsy naheno ny kapiteny tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety. Nahoana no tsy nisy ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety taorinan'ny fikaroham-bidy toy izany tamin'ny fampahalalam-baovao rehetra. Nahoana no tsy fantatra ny anaran'ilay sambo / sambo? Nahoana no tsy misy sarin'ny mpiambina / polisy sy ny marrefaussee momba ny famindrana? Nahoana i Peter R de Vries no nilaza fa mety hamono tena i Anja. Raha tena mahatsikaiky tokoa i Anja, nahoana no tsy nanoratra momba izany ny media?
Nahoana ny vahoaka no nitazona fisalasalana mikasika ny antokom-pianakaviana na mpikambana ao amin'ny fianakaviana ao amin'ny Blauwen Bock taorian'ny fivoriana farany, dia nambaran'izy ireo aloha fa fisotroan-drongony ny fianakaviana iray ary ny "olona" iray ao amin'ny fianakaviana dia mbola niteny hoe: mitaiza taxi.
Ary dia misy fanontaniana am-polony izay mahatonga ny olana manontolo ho toy ny tantara tsy marina, izay misy ireo mpanao gazety izay tonga niaraka tamin'ny sarin'ny sambo niaraka tamin'ny ekipa izay hitan'i Anja.
Sa tsy misy mpanao gazety intsony ary efa tapaka avokoa ny zava-drehetra? Tsy misalasala hanontany ny fanontaniana ny mpikatroka Katque.
Mpitondra solontenan'ny polisy fotsiny (Dick Goijert) miaraka amin'ny mikrofonina no nitondra ny tantara tamin'ny olona 17 tapitrisa, tsy maintsy mino isika fa tahaka ny pasitera
Ity ny tantaran'i Dick Goijert avy amin'ny polisy
kifafa nanoratra hoe:
28 June 2019 ao amin'ny 08: 21
Ao amin'ny kaonty twitter an'i Jacolien Schaap dia hita fa manahy ny amin'ny fanambaran'i Thierry Baudet ihany koa i Jacolien, nandritra ny vanim-potoana tsy hita tao Anja, ary nizara tatitra maro momba ny antisemitisma.
« Ny Holandeana dia tsy mahatsapa ny toe-javatra misy azy: ny fanandramana an-tranomaizina Stanford
Inona no atao hoe Deepfakes ary inona no naharetan'io tranga io? »
Total visits: 16.760.871
Maninona isika no mitory ny andiany izao rehetra izao amin'ny 7000 taona
ZalmInBlik op Fotoana hatao!
Zandi Eyes op Fotoana hatao!
Zonnetje op Ahoana no fomba hialana amin'ny fitsikerana ny politikam-panjakana? Asio tantara ny "Rypke Sail Maker"
Wilfred Bakker op Fa maninona no tany am-boalohany